Gobalada – Goobjoog News
Xubno matalayey haweenka Galmudug ayaa doortay guddoomiyaha Ururka Haweenka Galmudug, xoghayaha ururkaasi iyo guddoomiyaha Ururka Haweenka gobolka Galgaduud. Doorashadan ayaa ka dhacday guriga hooyooyinka degmada Cadaado, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socda maamulka Galmudug,...
Waxaa kasii dartay abaarta ka jirta deegaannada uu ka arrimiyo maamulka Puntland, waxaana ay saameysay dadka iyo duunyada. C/laahi Maxamed Barre, waa guddoomiyaha gobolka maamulka Puntland u bixiyey Karkaar, wuxuuna sheegay in xaaladda dadka ay...
Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey dagaal shalay duleedka magaaladaasi ku dhexmaray ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo Al-shabaab oo dhinac ah. Guddoomiyaha degmadaasi Aadan...
Degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa maanta oo Axad ah ka furmay shir looga hadlayo amniga guud ee deegaannada Galmudug. Shirkan ayaa socon doona Saddex maalin, waxaana ka qeybgalaya wasiirro iyo saraakiil Galmudug ah, iyadoo...
Agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Somkar Jaamac oo qeyb ka ah guddiga nabadeynta gobolka Mudug ayaa ka hadlay halka saldhigga rasmiga ah u noqoneysa ciidamada isku dhafka ah ee Puntland iyo Galmudug, xilli dhowaanahan uu jiray...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa soo saaray wareegto uu ku mamnuucay bixinta iyo iibinta dhulalka aan lahayn sharciga ee degmada Hobyo. Waxaa wareegtadan lagu faray guddoomiyaha degmada Hobyo inaan la iibin...
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Buq-aqable ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in maanta dagaalyahannada Al-shabaab ay ku toogteen halkaasi nin ay sheegeen inuu kamid ahaa ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya. Shaqsiga ay toogteen ciidamada Al-shabaab...
Wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in ay wax badan ka qaban-doonaan waxbarashada deegaannada maamulkaasi uu ka arrimiyo. Agaasimaha qorsheynta Waxbarashada ee Galmudug Cabdinaasir Cagaweyne ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar...
Xildhibaan Rajo Ka Muujiyey Wadahadallada Dowladda Federaalka Ah Iyo Somaliland
Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nac-nac oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Somaliland ayaa rajo ka muujiyey miradhalka wadahadal ay yeeshaan Somaliland iyo dowladda Federaalka. Xildhibaan Maxamed Diiriye Nac-nac waxaa uu intaasi raaciyay in muhiim ay...
Waxgaradka ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolkan Banaadir ayaa soo dhoweeyay go’aankii uu guddoomiyaha gobolka Banaadir, C/raxmaan Cismaan Yariisow uu ku joojiyey dhismaha dhulalka muranka uu ka jiro. Waxgaradka ayaa intaasi raaciyay in go’aankan uu...